म कसरी पैसा पुनः एसईओ कार्यक्रमहरू कमाउन सक्छु?
धेरै संकुचित-केंद्रित डिजिटल एजेन्सीहरूको लागि एक साधारण परिदृश्य हो जब एक क्लाइन्टले एसईओ सेवाहरूको लागि सोध्दछ, र तिनीहरू मद्दत गर्न सहमत छन्, यस क्षेत्रमा पर्याप्त अनुभव नगर्ने र यहाँसम्मका कर्मचारी कर्मचारी सदस्यहरू. हामी तिनीहरूको निर्णय बुझ्न सक्छौं किनकि तिनीहरू केवल ग्राहक गुमाउन चाहँदैनन्. धेरै महिनाहरूमा उनी वेबसाइटमा केही ट्राफिक प्राप्त गर्न र यसको दर्जामा सुधार गर्न संघर्ष गर्छन्. यद्यपि, उनीहरूले सकारात्मक नतिजा प्राप्त गर्न सक्दैन किनभने उनीसँग यस क्षेत्रमा कम विशेषज्ञता छ. यदि तपाईं समय एसईओ एसईओ बर्बाद गर्न चाहनुहुन्न भने, त्यहाँ एक तरिका हो. तपाईं एक राम्रो SEO पुनर्विक्रेता पाउन सक्नुहुन्छ.
सामान्यतया, एक एसईओ पुनर्विक्रेता एक व्यक्ति वा एजेन्सी हो जसले किफायती मूल्यहरु संग एसईओ सेवाहरुको विस्तृत दायरा प्रदान गर्दछ।. खोजी इन्जिन अनुकूलन रिसेलरले तपाईंलाई आफ्नो ग्राहकहरूको सम्पूर्ण अनुकूलन अभियान आउटसोर्स गर्न मद्दत गर्नेछ. एसईओ पुनर्विक्रेताले तपाईंलाई अझ बढी समय दिन्छ जुन तपाईं आफ्नो मुख्य योग्यतामा समर्पित हुन सक्नुहुन्छ र तपाईंको ग्राहकहरूको उत्तम परिणाम प्रदान गर्न सक्नुहुन्छ.
यस आलेखमा, तपाइँलाई उपयोगी जानकारी पाउनुहुनेछ कि कसरी सही पुनर्विक्रेता र कसरी उनीहरूको सेवाबाट लाभ उठाउन पाउनु हुनेछ?.
तपाई एसईओ पुनर्विक्रेता कार्यक्रम किन प्रयोग गर्न चाहानुहुन्छ?
सबै भन्दा पहिले, एक राम्रो एसईओ पुनर्विक्रेताले तपाईंलाई बलियो बिक्री क्षमता प्रदान गर्न सक्छ. तपाईंको काम अनुकूलन सेवा बेच्न को लागी, तर अनुकूलन विचारहरु बेचन गर्न को लागी, तपाईंलाई आफ्नो वेबसाइट को अनुकूलन प्रक्रिया र एसईओ रणनीति को बारे मा तपाईंको ग्राहक प्रश्नहरु को उत्तर मा सक्षम हुन को लागी तपाईंलाई एक सकारात्मक परिणाम प्राप्त गर्न को लागी आवश्यकता हो. तपाईंको ग्राहकहरूलाई मासिक एसईओ रिपोर्टहरू र प्राविधिक अंतर्दृष्टिहरू प्रदान गर्न तयार हुनुहोस्.
यदि तपाईंको एसईओ पुनर्विक्रेता कार्यक्रम मात्र सेतो टोपी एसईओ सेवाहरू समावेश गर्दछ भने. यस मामला मा, तपाईंको ग्राहकहरु लाई कभी नहीं ठेगाना हुनेछ कि तपाईं केहि अनुकूलन पहलुओं को आउटसोर्स आउटसोर्स गरेको छ. यसको अर्थ छ कि तपाईंको कम्पनीसँग नकारात्मक ग्राहक अनुभव तपाईले तपाईंलाई फिर्ता प्रतिबिम्बित गर्नेछ, तपाईंको एसईओ पुनर्विक्रेता कार्यक्रममा. यही कारणले तपाई एसईओ पुनर्विक्रेता चयन गर्दा सावधानी रहनु आवश्यक छ.
उत्पादन को ज्ञान
तपाईंलाई सामान्य एसईओ विचारहरु र रणनीतिहरु को बारे मा सजग हुनु पर्छ जुन तपाईंको आउटसोर्सर्स रिसेलर उत्पादहरु पछि. यसले तपाईंलाई कानुनी र व्यावसायिक आवाज पुर्याउन मद्दत गर्नेछ. यसबाहेक, यो तपाईंको ग्राहकलाई समृद्ध बनाउन को लागी रणनीतिहरु तिर तिर मार्गदर्शन गर्न तपाईंलाई मद्दत गर्नेछ. निश्चित रूपमा SEO रणनीतिहरू उपलब्ध गराउने निश्चित गर्नुहोस्, तपाईंले एसईओ पुनर्विक्रेता प्रोग्राम चयन गर्न आवश्यक छ जुन तपाइँले नियमित प्रशिक्षण प्रदान गर्दछ र आफैंमा छोड्नु भएको छैन।.
एसईओ एक महंगा मामला
वर्तमान मा, एक गुणवत्ता एसईओ सेवाहरु को धेरै धेरै खर्च. संयुक्त राज्य अमेरिका मा एक औसत एसईओ सलाहकार आफ्नो दक्षता स्तर को आधार मा प्रति घण्टा 150 डलर र अधिक प्राप्त गर्दछ. त्यसैले यदि तपाइँ आफ्नो एसईओ आउटसोर्स गर्न निर्णय गर्नुहुन्छ भने, तपाईं सकारात्मक नतिजा प्राप्त गर्न 100 भन्दा बढी डलर प्रति घण्टा तिर्न तयार हुनुपर्दछ. तपाईं आउटसोर्सिंग एसईओबाट लाभ उठाउन सक्नुहुन्छ, किनभने यसले विशेषज्ञ वेतनमा पैसा बचत गर्न र थप सम्बन्धित ग्राहकहरूलाई आकर्षित गर्न मद्दत गर्नेछ Source .